Iinxalenye siwisa, Ezilahlekileyo Wax Ivoti, dust Sol siwisa, Iron sichitha - Tongda
iindawo ezisindayo spare
castings oomatshini Mining
izitho cast Iron
izitho cast Steel
Silica Sol Ivoti
Parts Door Automatic
Womoya & Electric Parts
Lost Foam Ivoti
ELINGASETYENZISWANGA Wax ukulahlwa
Lost-wax ngodongwe (ekwabizwa ngokuba "utyalo eyahlulayo", "ngqo eyahlulayo", okanye cire perdue in French).
ELINGASETYENZISWANGA amagwebu ukulahlwa
Lost-amagwebu ngodongwe (LFC) kuyinto uhlobo inkqubo bephosa evaporative-ngokomfuziselo liyafana ekubunjweni utyalo ngaphandle njengogwebu isetyenziselwa ipateni endaweni ngumthwebeba.
Silicon Sol ukulahlwa
Silica sol eyahlulayo yinkqubo eyahlulayo kutyalo okufana insimbi castings zotyalo-mali.
Machining yiyo nayiphi na iinkqubo ezahlukeneyo apho isiqwenga izinto ekrwada isikwe kwemilo oyifunayo zokugqibela kunye nobungakanani ngenkqubo eziphathekayo-ukususwa elawulwa.
Umqondiso wokunyathela (eyaziwa ngokuba ibunzi) na inkqubo yokufaka yeflethi sheet metal mhlawumbi ingenanto okanye coil ifomu ibe kumatshini bexhentsa apho isixhobo bafe ubuso lwakha
ukulahlwa Die yinkqubo eyahlulayo sisinyithi amagama ngokunyanzela etyhidiweyo phantsi koxinzelelo oluphezulu ibe umngxuma sokubumbela.
Yacaca yinkqubo imveliso equka ekutshintsheni metal ngokusebenzisa amandla compressive nendawo.
Sand eyahlulayo, inkqubo ukulahlwa ezininzi ezisetyenziswayo kakhulu, isebenzisa ezibolile nesanti Abaxabisekanga ukwenza ezinye iintsimbi ezinzima njani oko kwenziwa phantse naluphi ingxubevange.
TDS014 eliphantsi-Carbon Steel
TDS013 eliphantsi-Carbon Steel
Tongda onazo iqela ngobuchule iinjineli ukuba benze uphando ezahlukeneyo izinto kwaye ziphuhlise imveliso OEM abathengi '. Ukuqinisekisa umgangatho, Tongda wakha ilebhu leyo eye Equipments ezifana X-reyi Tester, CMM, Spectrum Analysis Instrument, Metallographic Examination Instrument, Magnetic Particle lnspector, Ukuqina Tester, Impact Test Machine.and Universal Strength Tester.
Tongda iphumeze igama elihle apha ekhaya nakumazwe aphesheya kunye namaxabiso ayo kukhuphiswano, umgangatho oluthembekileyo, kwi-ixesha lokubeleka kunye kakuhle kweenkonzo emva kwentengiso, Tongda kwakhona ijolise besiba ophambili ekubunjweni manufactuer e China.